Martyr Birol Yıldırım Boulevard mepere ememme na New Melet Bridge | RayHaber | raillynews
[30 / 03 / 2020] Onu ogugu nke Coronavirus abuo karie 724 puku ndi nwuru anwu 34 puku	ỤWA
[30 / 03 / 2020] Ndi nwere nkwarụ ndi anata uru ọghọm ma rite uru na enyemaka elele ụlọ	06 Ankara
[30 / 03 / 2020] Nchebe anaghị ekwe ka ohere Coronavirus	General
[30 / 03 / 2020] Coronavirus Panic na Izmir Obodo Ime Obodo ..! Nkeji 6.	35 Izmir
[29 / 03 / 2020] 29.03.2020 Akụkọ Coronavirus: Anyị Echefuru 131 Ọrịa	coronavirus
HomeTurkeyBlack Sea Region52 ArmyMartyr Birol Yıldırım Boulevard mepere iji rụọ ọrụ na New Melet Bridge
Martyr Birol Yıldırım Boulevard mepere iji rụọ ọrụ na New Melet Bridge
27 / 02 / 2020 52 Army, Foto, General, hyperlinks, Black Sea Region, Ụzọ Awara Awara, Turkey
sehit birol yildirim boulevard na melet akwa mepere ọhụrụ
Martyr Birol Yıldırım Boulevard, nke Ordu Metropolitan Munara wuru na nke mbụ na Ordu, ka ọ bụrụ ụzọ ọzọ maka mgbanaka mgbanaka ahụ na akwa New Melet, nke enwere ike iji ya bụrụ ụzọ ọzọ n'okporo ụzọ mmiri Oké Osimiri Ojii, iji mee ememe.
Na-amalite site na ebe ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ ahụ dị, ụzọ 5km ahụ, nke dị na mpaghara ụlọ ọrụ Karapınar Mahallesi ma kpuchie nnukwu asphalt site na Yeni Melet Bridge gafere na ngbanye ụzọ Kayabaşı, abụrụla ụzọ ọzọ n'okporo ụzọ awara awara ahụ yana njupụta nke okporo ụzọ na mpaghara ahụ.
“ANY PR KWERE BEBARA Obodo Dị Mma”
Na-ekwu na Ordu na-agbadosi ụkwụ ike iji ghọrọ obodo ama ama, Ordu Metropolitan Mayor Dr. Mehmet Hilmi Güler kwuru, “Taa, anyị na-ewetara Ordu anyị ọmarịcha ọrụ abụọ. Otu n’ime ha bụ Akwa Melet New, ogologo 236. Akwa a ga-abụrụ Ordu ọhụrụ, ọ ga-eme ka okporo ụzọ anyị dajụọ. Anyị nyeere aka iweta kalinda ahụ ihu n'ihu site n'inwe akwa a, nke a na-eme atụmatụ ibute obodo anyị ụbọchị ọzọ. Ọ ga-amasi m n’okporo ụzọ awara awara butere ozi a n’obodo anyị n’oge ọnwa abụọ. Nke a gosipụtara ike nke steeti anyị. Anyị mepere boulevard mara mma. Dịka ụmụ amaala nke Kadirşinas, anyị kpọrọ aha onye nwụrụ n'ihi okwukwe ya Birol Yıldırım, onye jiri ọbara ya na ndụ ya chụọ aja maka obodo a. Ka ụzọ 2km baara ndị obodo anyị uru. Ihe dịkarịrị ọnụ ahịa ego abụọ ahụ bụ nde TL iri atọ. Anyi na-agbado ụkwụ na ike. Anyị chọrọ itinye ọtụtụ ọrụ mara mma n'obodo anyị. Anyi n’uzo ibu obodo amara aha. N'echiche a, otu ọrụ dị mkpa bụ idozi nsogbu okporo ụzọ. N’ime usoro a, okporo ụzọ anyị ga-adị mfe. Anyị na-eche akwa mmiri ọzọ ebe Melet zutere n'oké osimiri. Anyị na-emekwa atụmatụ nke a. Ordu gabu obodo nke akporo ya jiri mara. Melet ga-abụ ebe ndụ mara mma. Mgbe anyị chọpụtara ihe ndị a, ndị agha anyị ga-amacha mma na njem na ụlọ ọrụ. ”
“M KWESRR O ANYA IKIKERE METRROLOLITAN AGBARA MAKA”
Onye isi obodo nke Ordu Obodo ukwu Gọvanọ Ordu Seddar Yavuz, onye malitere okwu ya site na ikele Mehmet Hilmi Güler, kwuru, sị: “Ana m ekele ma na-ekele Gọvanọ anyị maka ọrụ ya. Mgbe akwa mmiri Cevizdere dara na mbibi ahụ n'afọ ndị gara aga, anyị hụrụ na anyị enweghị ụzọ ọzọ. Ọ dị mkpa ịghara ịgafe akwa mmiri. Chineke gbochie, ịdị mkpa nke itinye ego ndị a na usoro nke usoro, nchekwa na ụgbọ njem na-apụtawanye ìhè n'ọnọdụ ndị yiri ya. Ya mere, ọ dị mkpa ileba anya na itinye ego site na akụkụ a. M na-ekele anyị na-arụ ọrụ okporo ụzọ okporo ụzọ na obodo ukwu na-ahụ maka ịdị na-etinye ego ga-aba uru maka ógbè anyị. ”
Okwu ndị a, mkpinye ego abụọ ahụ emere ekpere mmeghe Mufti Mürsel Öztürk mepere emepe ka emepechara iwu ahụ.
Martyr Birol Yildirim Caddesi iji belata fficgbọala Ndị agha
Martyr Rafet hụrụ okporo ígwè nke Karacan Boulevard
Ọ bụ Yelçın Yamaner Boulevard Modernized
A na-ewu Àkwà Mmiri Ndị Ọzọ na Melet Bridge
E ji ememe ememme Samsun mee ihe
51 ọhụrụ ụgbọ ala ọha mmadụ malitere ọrụ na Şanlıurfa
Okporo Ụzọ Mgbaba Na-amalite na Ọrụ na Ememme
Tavşanlı - Kütahya Railbus line mepere ememe.
Ọdụm Metro Dị Iche Iche Na-amalite na Ememe Ukwu (Photo-Photo Gallery)
Malatya Gar Yaya Dịpụrụ adịpụ Emeghe maka Ọrụ
Gebze Halkalı Ije Ozi Marmaray Na-arụ Ọrụ
Ụgbọala na ụgbọala na-adọba ụgbọala amalite na ememe na Denizli
Okporo Ụzọ Oké Osimiri Oké Osimiri Black
Obodo ukwu dị na Ordu
Oti mkpu banyere Hygiene na Eskişehir Trams!
Aka Mbinye aka a nke AFRAY Commuter Line
Taa na History: 31 March 1868 Rumeli Railways
Obodo Elazig na-enyocha oche ntụrụndụ na Publicgbọ njem Ọha
A na-etinye Ngwaọrụ ndị na-emebi emebi na Bers na Mersin
Ọrụ Disinfection sitere na Konya Metropolitan ruo Dolmuş, Taksị azụmahịa na Ọrụ
Nzaghachi siri ike sitere na Companylọ Ọrụ -gbọ Mmiri İmamo Buslu “Mwube Ọ bụrụ Ọ Bụrụ Ọchịchị Ọ Bụ”
Onye Mịnịsta na-ahụ maka ego German Schaefer hụrụ nwụrụ anwụ na Line Speed ​​High
Coronavirus ujo na ndị ọrụ IETT ..! 7 Ndị mmadụ iche
E kesara ndị nwere ntụpọ na masks na Buses na Kocaeli
Ndi nwere nkwarụ ndi anata uru ọghọm ma rite uru na enyemaka elele ụlọ
Nchebe anaghị ekwe ka ohere Coronavirus
Mkpanye Coronavirus na Akwukwo Akwukwo Ego na ndi Ministry nke Mpaghara
Oge Nkwuputa curezụta: Nweta nke 49 E1 na 60 E1 Ihe Nkpuchi Shears Cross Mark
Nleta ị nweta: Mweghachi nke Sgbọ mmiri Man na Onye Ọrụ
Metro Istanbul ga-ewe ndị ọrụ iri abụọ na asaa
Ingdọ aka na ntị banyere gị chekwaa ndị mmado nọ na AŞTİ
Akara Mbinye ụgbọ njem Canray na Alstom's First Zero Emission Train
TÜVASAŞ na-atụgharị na Sistemụ Sistemụ Ntinye! A na-eziga ndị ọrụ 700 n'ụlọ ha
Anyị ga-emekọrịta ọnụ!
Coronavirus Panic na Izmir Obodo Ime Obodo ..! Nkeji 6.
Ogige 13 Mmanụ Ala maka Istanbul Airport